Barcelona Oo Doonaysa Inay Philippe Coutinho Ku Fasaxdo Heshiis 18 Bilood Ah Oo Amaah Ah
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo doonaysa inay Philippe Coutinho ku Fasaxdo heshiis 18 bilood ah oo amaah ah
January 7, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa rajeyneysa inay heshiis amaah ah oo 18 bilood ah la gaarto koox kale si ay ula soo saxiixato Philippe Coutinho bisha Janaayo.
29-sano jirkaan ayaa la filayaa inuu si dhaqsi ah uga tago Camp Nou, iyadoo hal warbixin ay sheegeyso in kubadsameeyaha uu go’aan kama dambeys ah ka gaari doono halka uu ku wajahan yahay maalinta Jimcaha.
Ilaa lix kooxood oo Premier League ah ayaa la rumeysan yahay inay diwaan galiyeen xiisahooda saxiixa Coutinho, iyadoo Aston Villa ay tahay hal koox oo horey wadahadal ula gashay wakiilada Brazil.
Sida laga soo xigtay Daily Mirror , Barcelona ayaa doonaysa in koox kasta oo xiisaynaysa ay amaah ku qaadato Coutinho ilaa June 2023 markaas oo uu heshiiskiisu dhacayo.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Villa ay door bideyso inay Coutinho ku soo qaadato heshiis amaah ah oo lix bilood ah ilaa dhamaadka ololahan, inkastoo Barca ay rajeyneyso inay ku qanciso kooxda Steven Gerrard inay ku qaadato sanad dheeri ah.
Arsenal , Everton , Leicester City , Newcastle United iyo Tottenham Hotspur waa shan kooxood oo kale oo heer sare ah oo Ingariiska ah kuwaas oo sidoo kale lala xiriirinayo Coutinho, kaasoo afar sano ka soo garab ciyaaray Gerrard Liverpool ka hor inta uusan 142 milyan ginni ugu dhaqaaqin Barcelona Janaayo 2018.